EZE GA-ACHỊ OBODO EBUNYELA NDI OBODO YA ỤGBỌ ỌRỤ NCHEKWA – hoo!haa!!
NDỊ NA-EBU ASỊRỊ MAKA ỌNWỤ ABBA KYARỊ BỤ NDỊ ARỤRỤALA - FANI KAYODE
MKPỌCHI OBODO COVID-19: CHARDON EKEELA NDỊ ỌRAUKWU IHE RURU N50M
ỌRỊA KORO: ỤFỌDỤ NDỊ NNE NA-ENYEZI ỤMỤ HA 'SANITIZER' DỊKA ỌGWỤ MGBOCHI
N'IME NSOGBU ỌRỊA KORO, 'COUNCILLOR' ALỤWO ỤMỤ NWANYỊ ABỤỌ OTU ỤBỌCHỊ
MAHADUM LASU EMEPỤTAWO NGWANRO NNYOCHA AHỤ ỌRỊA KORO MAKA EKWENTỊ
ỌRỊA KORO: NDỊ UWE OJII AKPỌCHIELA MMỌNWỤ DARA IWU MKPỌCHI OBODO
EZE GA-ACHỊ OBODO EBUNYELA NDI OBODO YA ỤGBỌ ỌRỤ NCHEKWA
Onye ahọpụtara ka ọ chịa obodo ahụ kwụrụ onwe ya bụ Ozalla/Obogidi (autonomous community), dị n’okpuru ọchịchị ime obodo Nsukka bụ Nnukwu Ichie Asadu Samuel Ikechukwu ebunyela ndi nche agbata-obi, nke Edem Ani ụgbọ-ala ọrụ nche, iji nye aka maka ikwalute ọrụ nche obodo ahụ.
Ichie Asadu eji Okenwa Ọgadagidi mara gwara ndi nta akụkọ na ya nyere onyinye ụgbọalaa iji nyere ndi nche agbatobi obodo ahụ aka ịbanye n’akụkụ ime ime obodo ahụ dị iche iche na-agbanyeghị ụdị ajọ ụzọ ọbụla ga-echere ha aka mgba. Okenwa Ogadagidi kwuru na ọrụ ịchekwa obodo abụghị nke gọmenti nanị ya, kama na ọbụ ọrụ dịịrị onye ọbụla.
Okenwa Ogadagidi kwere nkwa irụkwa ụgbọala ahụ ma o mebie, otu afọ. Onyekwara ndi ọrụ nche ahụ ọkụ mpịpị nakwa uwe mmiri ka-agharakwa inwe ihe ga-anpụ nkịta igba ọsọ.
Ichie Asadụ bụ onye bibu na mba Texas nke Amịrịka sịrị na ya enwela mmasị ịlọta obodo anyị maka ibia nye aka ikwakite odị mma obodo ya. Ọ sịkwa na enyem aka ya ga-agara Ozalla/Obogidi bụ obodo ya nakwa steeti Enugu niile. Ọ sị na-ikwalite ọdị mma ụmụ na-eto eto bu ụzọ n’atụmatụ mmepe ya.
Ichie Asadu bunyere ụlọ akwụkwọ nta anọ di n’obodo ahụ igwe kọmputa iri nakwa igwe ọkụ latrik (70KVA) anọ iji nyere ha aka isonyere n’ụgbọ awara awara nke ụwa nọ n’ime ya kita.
Ọ sịrị na Chukwu kwado ya, na ya ga eme ka obodo ya bụrụ ebe ndi mmadụ ga na-abia maka ịgbara anya ha ekeresimesi.
Previous Post: BUHARI ATỤKWALA OGBUNIGWE ỌZỌ